DNC Izimonyo - indlela ephumelelayo futhi engabizi for isikhumba ukunakekelwa
Dagestan Scientific Centre - inkampani wahlanganyela ukwakhiwa nokusatshalaliswa imigqa ubuso, umzimba kanye izinwele. Direction womsebenzi we Dagestan Scientific Centre bekulokhu ukukhiqizwa izimonyo Latvian. Iqiniso lokuthi eSoviet Union naseMpumalanga Yurophu, kwakubhekwa njengento eliphezulu futhi baziswa kakhulu.
Ukuvela sha, Dagestan Scientific Centre
Le nkampani yasungulwa ngo-1990 ngu-onjiniyela abasebasha babeza besuka eRiga, othathe umhlalaphansi kusukela ezibolile yesayensi ukukhiqizwa inhlangano. Ukuqinisekisa ukusatshalaliswa kwemikhiqizo kwenziwa umsebenzi asebenzayo ku usesho unomphela kozakwethu nokudala sokusakaza. Ukubhebhetheka izimonyo ekhiqizwa ngenkathi usebenza balamuli Latvian, isiFulentshi futhi Russian. izinzuzo ukuncintisana umkhiqizo bekulokhu intengo nekhwalithi, futhi izindleko ongaphakeme zokukhiqiza kwakubangelwa asihlobene izindleko zokukhangisa.
Ngokuhamba kwesikhathi, isidingo kwabathengi kancane kancane washintsha futhi babe eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka brand ye DNC, ogama isimo sidalwe ngokuyinhloko ukuze azivikele izinguquko ezihlobene nokukhula futhi iziphi izici zangaphandle.
Manje ochwepheshe yenkampani njalo wahlanganyela ekuthuthukiseni ukuthuthukiswa yabo. Kukhona uguquko kanye ngcono uhla izimpahla ngokuhambisana ngokugcwele izifiso amakhasimende.
On lokho kusekelwe ukudalwa izimali, Dagestan Scientific Centre?
Phakathi izimonyo DNC yenziwa kuphela kusuka izithako zemvelo. Kulokhu ukubaluleka okukhulu unamathele lokuhlala abalulekile kumalungu.
A umbandela ibaluleke kakhulu abahlinzeki abaningi ukwenziwa imikhiqizo ukunakekelwa ukunikeza "induduzo uzizwa", okuyinto bathatha-9 kwezingu-10 umzamo. Waba yini umphumela walesi msebenzi ukhilimu ukukhanya, amaphesenti angu-90 noma ngaphezulu ehlanganisa amanzi. Ngakho-ke, kuba nesidingo ukuze ungeze emulsifiers e ukwakhiwa yabo NEZIVIKELAKUVUNDA. Kunengqondo ukuthi, uma ayifakiwe amanzi, isidingo izithasiselo ezifana iphele.
Ngokuvamile izingxenye eziwusizo, okungukuthi, uwoyela, utshani, ubumba, ezikhishwe nosawoti usebenzisa ungawakhi beneme, kodwa ngokushesha kakhulu ukukhombisa nezici zabo. Kususelwa kule futhi imikhiqizo isinyathelo DNC. Izimonyo eyenziwe ngokomzwelo okungokwemvelo, abangafuni ngaphansi chemical ukwelashwa izithako. Ngakho-ke, lezi zimali ikakhulukazi musa obulimaza isikhumba futhi akavumi ukuba komzimba.
Ukubukeza ijeli ukugcoba ubuso, "asidi i-hyaluronic" kusukela Dagestan Scientific Centre
abesifazane Modern lapho ekhetha izimali umnakekeli ngokuvamile sinake khona asidi i-hyaluronic e kwengoma. Ukuze ukwandisa nekusebenta ukuchayeka impahla kule DNC (izimonyo) iqembu , asidi i-hyaluronic siphakamisiwe ngefomu okumsulwa. Abathengi abaningi kukhonjisiwe ukubuyekeza ukuthi ijeli nsé salon inqubo ekhaya. Kuyaqapheleka futhi ukuthi asidi i-hyaluronic kufanelekile oily ezithandwa isikhumba emzimbeni.
Sebenzisa umkhiqizo kungaba ukhilimu noma ngokuzimela. Okumbi zihlanganisa tackiness, ngakho ngaphambi ukunakekelwa okwengeziwe kuyadingeka ukulinda ukumuncwa ephelele. Ukuze uthole imiphumela emihle kunconywa ukusebenzisa imikhiqizo brand, okungukuthi, DNC. Izimonyo okuzenzekelayo: moisturizes isikhumba okuligcwalisile kusuka ngaphakathi. Lokhu kwakha nomphumela izinsimbi, futhi emva ukuwasha ayibonakali umuzwa yobunzima kwesikhumba.
Uphenyo Dagestan Scientific Centre imikhiqizo
Bio for uyaxebuka izinzipho kusukela burrs - ithuluzi enkulu njengempi yonke imikhiqizo ye-DNC brand. Izimonyo ngokuyinhloko ngcono isimo izinzipho. Phela, kubalulekile ukuba wonke umuntu wesifazane ukubheka izandla amahle, ngoba kukhona ubufakazi eqondile yobudala, ukunemba, ukuzilungisa nezinye izimfanelo womnikazi yabo.
Kuyaphawuleka ngcono isimo umugqa isandla isikhumba umkhiqizo DNC-brand izimonyo. Izibuyekezo uqinisekise ukuthi: emva kwenyanga yokusetshenziswa kusho esikhumbeni azungeze ipuleti nail is sashintsha, ngakho cuticle isuswe kalula. Amafutha iqukethe ngengcina yezinyosi, okuyinto ngesivinini ukukhula izinzipho. Futhi uma ukukuthinta ku ebusuku, it is wafeza yi obubaluleke kakhulu.
amakhasimende abesifazane futhi sidumise ngamafutha chamomile, deodorants kanye neminye imikhiqizo ye-iqembu elihambisana brand DNC (izimonyo). Izibuyekezo abonisa ukuthi ngokuvamile izinga umkhiqizo kunakunoma imikhiqizo brand kakhulu zamaphoyisa. Eqinisweni, isethulo ezinhle ibuphi ubufakazi balo msebenzi omuhle kakhulu Umnyango wezokumaketha, kodwa akuqinisekisi ukutholakala izakhiwo abalulekile ngokulinganayo omuhle komkhiqizo.
Izinwele ezifanele futhi enikeziwe kusho DNC. Izimonyo kwenza izinwele ethambile, nilalela, sivuselela kubo. Abathengi ukudumisa izakhiwo bioactive ngokumelene sigaba, futhi nezinwele: "ngumbuyiseli isakhiwo" Hashaza DNC «uviniga French" kanye nezinye izindlela.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, abantu abafana sha DNC izimonyo. Lapho ukuthenga lezi zimali? Lona umbuzo ethandwa ebuzwa abathengi. Ngeshwa, i-brand akuyona kwandile, futhi imikhiqizo yayo zidayiswa ku-intanethi, Pharmacy ambalwa futhi izitolo onguchwepheshe ukudayiswa izimonyo.
Abathengi makudle DNC ngenxa ongaphakeme izindleko, ukusebenza bafunde nangendlela engokwemvelo. Lokhu ukwakheka kufanelekile abantu bayayazisa impilo yabo kanye nenhlalakahle!
Marc Jacobs - amakha ngoba natures unethemba
Khetha ukhilimu esifanele inabukeni
NYX (izimonyo): lapho ukuthenga e Moscow, banganamukeli siyakhubeka ku-mbumbulu
"Max Factor Color Nezimo" (isisekelo): ukubuyekezwa kanye incazelo
Amathiphu ngokukhetha nail sula
School izimonyo Creative: ukuhlola i zokuhlobisa makeup igxathu negxathu for brown amehlo
Le filimu "ezithunjiwe": ukubuyekezwa, sakhiwo, abadlali kanye izindima
Lapho udinga luhlolo forensic zengqondo?
Amasampula Russian ulimi futhi uthisha izincwadi iphothifoliyo
Izinhlumba Izindlela zokwelapha isibindi medicamental futhi abantu
I-Modem "MTS Connect": i-modems, abashayeli, amanani, ukufakwa nokucushwa
Umsebenzi Remote - ubuthishela copywriter / rewriter
Okwekati iphendula izinto elikhanyayo. Njengoba ikati ubona izwe
"Krasny Bor" landfill. Leningrad, "Krasny Bor"
I-Cream "Vichy Lifttiv": izibuyekezo zohlelo lokusebenza
Uma ushonelwe passport yakho, yini okufanele uyenze?